ခင်လွန်း – ပုန်းခိုသူ | MoeMaKa Burmese News & Media
ခင်လွန်း – ပုန်းခိုသူ
ခင်လွန်း၊ ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၄
ဒီညမှာ ကျနော်ဟာ ပုန်းခိုသူဖြစ်ခဲ့ပြီ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လျပ်တပြက်တွေ့ ။
ဦး အိမ်ကိုမဆက်သွယ်တာ ကြာပြီ….
ဦး အခြေအနေသိချင်ကြ ကျန်းမာရေးက အစ
သူ့ကိုသူလည်း မမှတ်မိတော့ … တဲ့။
ဦးကတော့ ဘာဖြစ်လို့မပြန်တာလဲတဲ့ ….
ဘာလို့လဲ ဘာလို့လဲ ….
ကျွန်ုပ်တို့ အတူ ပုန်းခိုကြစို့လား…
ဒီတည ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ပုန်းခိုကြစို့လား ….
1172014 ။ 945 pm
Photo – http://mysticmorning.deviantart.com/art/Moonless-Night-Texture-210429838